Umhlahlandlela womzali wezimpawu ze-RSV, ukuxilongwa, nokwelashwa - Imfundo Yezempilo | Septhemba 2021
Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Imidlalo Inkampani, Ulwazi Lwezidakamizwa Inkampani, Izindaba Izidakamizwa Vs. Umngani Ezemidlalo Ezisindayo Cindezela Imininingwane Yezidakamizwa Inkampani Imfundo Yezempilo Ezempilo Umphakathi, Inkampani Ukuphila Kahle Inkampani, Imfundo Yezempilo Umphakathi, Ukuphila Kahle
Main >> Imfundo Yezempilo >> Umhlahlandlela womzali we-RSV
Umhlahlandlela womzali we-RSV
Ukukhwehlela okungapheli nokuthimula, amakhala agobayo, namaqhubu alumayo angachazeki — izingane zibonakala ziyibuthe lamagciwane. Kumhlahlandlela womzali wethu ezifweni zobuntwana, sikhuluma ngezimpawu nokwelashwa kwezimo ezivame kakhulu. Funda uchungechunge oluphelele lapha .
Yini i-RSV? | Izimpawu | Ukuxilongwa | Ukwelashwa | Ukuvimbela
Ngenkathi ngikhulelwe ingane yami yokuqala futhi ngifunda yonke imininingwane ephathelene nezinsana engangizithola, omunye wabaqaphi bezihloko ezangidonsela amehlo kwakungu-RSV. Esimweni sami sokuqaphela umama omusha ozoqikelela kakhulu, i-RSV yaba yisilo esincathayo, ikakhulukazi esinengane ngenxa kaFebhuwari-khona kanye phakathi nenkathi ye-RSV. Ngangazi ukuthi kungaba kubi ezinganeni ezincane, ngakho-ke ekhanda lami, kwaba yisitha sokuqala. Ngokujabulisayo, lapho sengidlulile ekuphenduleni kwe-visceral, ngafunda ukuthi isikhathi esiningi, i-RSV ayibi kakhulu. Eqinisweni, cishe zonke izingane zizobe zithole okungenani i-RSV eyodwa yokutheleleka lapho zifinyelela eminyakeni emibili ubudala, imvamisa ngaphandle kwemiphumela emibi.
Igciwane le-syncytial yokuphefumula (i-RSV) igciwane lokuphefumula elivame ukudala ubumnene, izimpawu ezibandayo , uthi Soma Mandal , MD, umfundi oqeqeshwe ebhodini eSummit Medical Group. Kungaba yinkinga ezinganeni nakubantu abadala asebekhulile. Kuyimbangela evame kakhulu ye-bronchiolitis (ukuvuvukala kwemigwaqo yomoya emincane yamaphaphu) kanye inyumoniya ezinganeni ezingaphansi konyaka owodwa ubudala.
I-RSV ivame kakhulu futhi kakhulu iyathathelana , isabalala kalula ngezindawo ezinjengezindawo zokunakekela izingane kanye nezikole. Umuntu onegciwane uyiloimvamisa ithelelana nge-RSV izinsuku ezintathu kuya kweziyisishiyagalombili , ngokusho kweCenters for Disease Control and Prevention (CDC), kodwa ezinye izinsana nabantu abanamasosha omzimba abuthakathaka bangahlala bethathelana kuze kuphele amasonto amane, noma ngabe bengasenazo izimpawu.
I-pepto bismol isebenza kanjani esiswini esithukuthele
Ngenkathi kungenzeka ukubamba i-RSV nganoma yisiphi isikhathi sonyaka, i-RSV ivame kakhulu phakathi kokuwa sekwephuzile nasekuqaleni kwentwasahlobo, cishe ngesikhathi esifanayo umkhuhlane inkathi .
Abantu banoma yibuphi ubudala bangabamba i-RSV, kepha ezinye izibalo zabantu zisengozini enkulu yezinkinga. Izinsana nabantu abadala asebekhulile, ikakhulukazi labo abadala kuneminyaka engama-65, basengozini [ephakeme] ye-RSV, kusho uDkt. Mandal. Abantu abadala abanesifo esingapheli senhliziyo noma samaphaphu noma labo abangenakuzivikela ekuzivikeleni komzimba nabo basengozini ethile. I-RSV kwesinye isikhathi ingazenza zibe zimbi izimo zabantu abane-asthma, i-COPD, kanye nokwehluleka kwenhliziyo okucinana.
Izici ezinobungozi be-RSV enganeni noma enganeni esencane faka phakathi :
Izinsana ezizalwe ngaphambi kwesikhathi, ikakhulukazi ngaphambi kwesonto lama-29 lokukhulelwa
Isisindo sokuzalwa esiphansi
Imncane kunamasonto ayi-12 ubudala ngesikhathi se-RSV
Isifo samaphaphu esingapheli sokungakhuli kuqala
Amasosha omzimba abuthakathaka (ngenxa yokugula noma ukwelashwa)
Izinkinga ezithile zenhliziyo
Ukuba nezingane zakini (i-RSV ingadluliselwa isuka ezinganeni ezindala iye ezinganeni nasezinganeni ezisencane)
Ukubhema komama ngesikhathi sokukhulelwa
Ukuvezwa intuthu kagwayi
Umlando we-atopy (i-allergies / eczema)
Ukungancelisi (ukuncelisa ibele kudlulisa ama-antibodies kusuka kumuntu omdala kuye enganeni / enganeni)
Ukuvezwa njalo ezinombolweni eziphakeme zabantu njengasesimweni sokunakekelwa kwezingane noma ezimeni zokuphila eziminyene
I-RSV ngokuvamile ibonakala njengamakhaza avamile, ikakhulukazi kubantu abadala nezingane ezindala. Yize izimpawu zigqagqana nezimpawu ezithile ze-COVID-19, akuvamisile ukudala ukukhwehlela okomile noma ukulahleka kwephunga nokunambitheka. Izimpawu ze-RSV zifaka:
Impumulo ejiyile / egijimayo kakhulu
Ngokuvamile ngizizwa ngingaphilile
Kubantu abaningi, izimpawu ngeke zidlule kulesi sigaba. Kwezinye izingane nezingane, i-RSV ingaholela ezimeni ezibucayi, njenge-pneumonia (ukutheleleka nokuvuvukala kwamasaka omoya kwelinye noma womabili amaphaphu), i-bronchiolitis (amafinyila emigwaqeni yomoya engenhla nengezansi), noma i-apnea (emisa ukuphefumula).
Izimpawu ezimbi kakhulu zokutheleleka nge-RSV okunzima ukufuna ezinganeni nasezinganeni, ngaphezu kwezimpawu ezibandayo, faka phakathi :
Ukukhanda ikhanda ngokuphefumula
Ukububula ngesigqi ngesikhathi sokuphefumula
Ukuphefumula ngamathumbu, ukudonsa phakathi kwezimbambo kanye / noma ukudonsa entanyeni engezansi. (Uma ubambo luvaleka lapho ingane / ingane ihogela, yakha i-V ebheke phansi ngaphansi kwentamo, iba nobunzima bokuphefumula.)
Ingabe kufanele ngifune ukunakekelwa kwezingane kwengane ene-RSV?
Ngenxa yokuthi i-RSV ingafana nomkhuhlane ovamile, kungaba nzima ukuthola ukuthi ukuqokwa kukadokotela kuyadingeka yini. Shayela umhlinzeki wakho oyinhloko wezokunakekelwa kwempilo uma ingane yakho noma ingane :
Ingaphansi kwezinyanga eziyisithupha ubudala futhi inezimpawu ezibandayo
Isengozini enkulu ye-RSV futhi inezimpawu ezibandayo
Unenkinga yokudla, ukuphuza, noma ukulala
Kubonakala sengathi ngigula kakhulu noma ngiyi-cranky kakhulu
Unomkhuhlane omkhulu (ongaphezu kuka-100.3 F uma ungaphansi kwamasonto amane, noma ngaphezulu kuka-100.9 F wamasonto angaphezu kwamane ubudala)
Ulele kakhulu noma akasebenzi
Unesikhwehlela esiba sibi kakhulu noma esikhiqiza amafinyila aphuzi, aluhlaza noma ompunga
I-RSV ingaba yimbi. I-RSV imvamisa yisifo esiphansi noma esilinganiselayo esingadingi ukulala esibhedlela, kusho I-Ashanti Woods , MD, udokotela wezingane eMercy Medical Center eBaltimore. Kodwa-ke, kwezinye izimo, womabili amacala alinganiselayo futhi anzima angadinga ukulaliswa esibhedlela, kwesinye isikhathi nasezindaweni zokunakekelwa kwabagula kakhulu. Uma ingane inenkinga yokuphefumula, leyo ngane ingadinga ukufakwa ishubhu emaphashini ayo ukuyisiza ngokuphefumula. I-RSV ingaba yimbi impela futhi isongele nokuphila kwezinye izimo.
Funa usizo lwezokwelashwa olusheshayo / oluphuthumayo uma ingane noma ingane yakho:
Unenkinga yokuphefumula, uphefumula ngokushesha, noma uhamba kancane
Ukozela kakhulu, ukudinwa, noma ukwehla okuphawulekayo kokusebenza nokuphaphama
Inezindebe, isikhumba, ulimi, noma izinzipho ezibukeka ziluhlaza okwesibhakabhaka noma mpunga ngombala
Imibukiso izimpawu zokoma (ukunciphisa ukuchama, indawo ethambile eshonile ekhanda, umlomo owomile, izinyembezi ezimbalwa ngenkathi ukhala, njll.)
Unezimpawu ze-pneumonia noma i-bronchiolitis (bheka uhlu lwezimpawu ezinzima ngenhla)
Uma ukholwa ukuthi ingane / ingane idinga ukwelashwa ngokushesha
Ngokujabulisayo, ukulaliswa esibhedlela kwe-RSV akuvamile — zingu-3% kuphela izingane ezine-RSV ezizodinga ukuhlala esibhedlela, futhi iningi lalezo zingane liya emakhaya kungakapheli izinsuku ezimbalwa. Akuvamile ukuthi ingane ihlale egumbini labagula kakhulu (PICU).
Ixilongwa kanjani i-RSV?
I-RSV imvamisa ukuxilongwa emtholampilo, okusho ukuthi udokotela noma umhlengikazi uthola umlando esigulini bese enza isivivinyo sokuthola ukuxilongwa, kusho uDkt Woods. I-RSV ingatholwa ngokuwashwa ngamakhala, noma ukuqoqa amafinyila emakhaleni noma emphinjeni womuntu bese uwuthumela ebhodini ukuze ihlolwe.
Umhlinzeki wezokunakekelwa kwempilo angenza futhi ama-X-ray esifubeni noma okunye ukuhlolwa kwezimo ezihlobene ne-RSV.
Ukutheleleka okuningi kwe-RSV zihambe zodwa , imvamisa kungakapheli isonto elilodwa kuya kwamabili.
Ukwelashwa kwe-RSV ngokuyinhloko kusekela, okubandakanya ukuqapha njalo, kanye nokuphathwa kokusekelwa okuphefumulayo nokuphefumula njengoba kudingeka, kusho uDkt. Mandal.
Ngokufanelekile, i-hydration inikezwa ngomlomo futhi kuyaqabukela ukuthi i-IV idingeke. Ezinganeni nasezinganeni ezindala kunezinyanga eziyisithupha, imfiva kungaphathwa nge imishanguzo yamakhasimende njenge I-Advil , UMotrin (ibuprofen ), noma UTylenol (acetaminophen ). UNGAYisebenzisi i-aspirin, njengoba ixhunywe kuyo Isifo sikaReye ezinganeni ezinezifo ezibangelwa amagciwane.
Ezinye izindlela zokwelapha ekhaya zifaka:
Usebenzisa i-humidifier epholile (ungalokothi usebenzise i-humidifier efudumele noma eshisayo, okuyingozi yokusha).
Ukunikeza iziphuzo eziningi (ubisi lwebele noma ifomula kuphela ezinganeni ezingaphansi kwezinyanga eziyisithupha. Amanzi noma i-Pedialyte, ngaphezu kobisi lwebele noma ifomula (uma kusebenza), ezinganeni nasezinyangeni ezingaphezu kwezinyanga eziyisithupha.)
Ukuxegisa nokususa amafinyila ezinganeni nasezinganeni ezisencane kakhulu ukuthi zingaphephetha amakhala ngamaconsi kasawoti (amanzi anosawoti) kanye nesirinji yebhalbhu.
Kunezimo ezimbalwa lapho ukwelashwa kokuphefumula kunganikezwa, kusho uDkt Woods. Imithi esetshenziselwa ukuhlaselwa yisifuba somoya njenge albuterol noma i-steroids ngokuvamile ayisebenzi ekwelapheni i-RSV, yize kwesinye isikhathi isetshenziswa ezimweni lapho isiguli saziwa njenge-asthmatic.
Ezimweni ezinzima kakhulu, usizo lokuphefumula olufana nomoya-mpilo lunganikezwa, noma i-intubation (ithubhu elifakwa phansi komphimbo lize ligudle umoya, ngokuphefumula okusizwa umshini) kungadingeka.
I-RSV ithelelana kakhulu. Njengamakhaza avamile, i-RSV isakazeka ngamaconsi (amathe, amafinyila, ukuphuma kwamakhala) isuka kumuntu iye komunye umuntu (ngokukhwehlela, ukuthimula, ukukhafula), nasekuxhumaneni nezindawo ezingcoliswe yi-RSV. I-RSV ingaphila ezindaweni ezinjengamathoyizi nezinkinobho zomnyango kuze kube ngamahora ayisithupha.
Indlela engcono yokuvimbela ukusabalala kwe-RSV (nezinye izifo ezithathelwanayo) ukwenza inhlanzeko efanele.
Geza izandla njalo futhi kahle ngensipho namanzi afudumele okungenani imizuzwana engama-20, ikakhulukazi ngaphambi kokuthinta izingane, ukupheka, noma ukudla, nangemva kokuthimula / ukukhwehlela, noma ukushintsha amanabukeni. I-RSV ingaphila ngezandla ezingageziwe okungenani imizuzu engama-30.
Hlanza futhi ukhiphe amagciwane ezintweni ezisetshenziswa njalo.
Geza amathoyizi ezingane nezingubo zezingane njalo.
Ungabelani ngezinto ezinjenge-pacifiers, amathawula, ukusika, izinkomishi, njll.
Khubaza ukuqabula ingane.
Qinisekisa ukuthi ingane yakho nawo wonke amalungu omndeni asesikhathini ngemigomo ejwayelekile, kufaka phakathi imigomo yonyaka yomkhuhlane.
Ukugwema ukuxhumana okuseduze nalabo abangasabalalisa i-RSV nakho kubalulekile, ikakhulukazi kulabo abasengozini enkulu.
isilinganiso esiphezulu sevithamini d ngaphezulu kwekhawunta
Gcina labo abasengozini enkulu kude nanoma ubani onezimpawu ezifana nokubanda
Nciphisa ukuvezwa kwengane yakho ezixukwini
Uma kwenzeka, gwema izikhungo zokunakekela izingane ezinezingane eziningi ngenkathi yokuqala yobusika yengane
Kungenzeka ukuthi ubambe i-RSV ngaphezu kokukodwa, ngisho nangesikhathi esifanayo, ngakho-ke lezi zinyathelo zidinga ukuthathwa nawo wonke umuntu, kufaka phakathi izingane ezinempilo ngisho nezingane ezake zatheleleka nge-RSV phambilini.
Njengamanje ayikho i-antiviral eyamukelwa kabanzi ye-RSV uma isiguli sinayo, kusho uDkt Woods. Kukhona umuthi wokugoma (i-Palivizumab) otholakala ezigulini ezisengozini enkulu kubandakanya nezingane ezizalwe ngaphambi kwesikhathi ngokweqile (imvamisa amasonto ayi-10 noma ngaphezulu ngaphambi kosuku lwazo olubekiwe) ezinikezwa ekuqaleni kwenkathi ye-RSV ukuvimbela ukuthi zingayitholi. Umhlinzeki wezokunakekelwa kwezempilo anganquma ukuthi lo muthi (imijovo eminingi) welulekwa iziguli ezithile njengendlela yokuvimbela. Kukhona kakhulu izindlela eziqinile ngalokhu kwelashwa njengoba kubiza kakhulu futhi imishwalense isebenzisa lezi zindlela ukunquma ukumbozwa.
Ngenkathi i-RSV ingethusa futhi kufanele ithathwe ngokungathi sína kakhulu, kuyaduduza ukwazi ukuthi ezinganeni eziningi, akuyona inkinga. Zijwayeze izindlela zokuvimbela ukuvikela abasengozini enkulu phakathi kwethu, uqaphele leyo mikhuhlane, futhi ugcine lezo zandla zihlanzekile!
I-FDA igunyaza u-Erleada, ukwelashwa okusha komdlavuza wendlala yesinye
Yikuphi ukudambisa izinhlungu okuhle noma ukunciphisa imfiva ezinganeni?
umuthi omuhle kakhulu wokungezwani komzimba nempova notshani
isikhathi esingakanani emva kocansi ungathatha uhlelo b
Ngingathatha ipulani b ngemuva kwezinsuku ezi-2
kufanele ibe yini iglucose yegazi lakho ngemuva kokudla
liyini izinga elijwayelekile le-a1c kubantu abadala